कार्तिक २ र ३ गते देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधी खुवाइने... सक्दो सेयर गरिदिनु होला - Internet Sansar
Home / Health / कार्तिक २ र ३ गते देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधी खुवाइने… सक्दो सेयर गरिदिनु होला
internetsansar October 9, 2019	Health Comments Off on कार्तिक २ र ३ गते देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधी खुवाइने… सक्दो सेयर गरिदिनु होला 258 Views
काठमाडौँ, २२ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्तिक २ र ३ गते देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाउने भएको छ ।आर्थिक वर्ष ०७६/७७ अन्तर्गत पहिलो चरण ७५३ वटै स्थानिय तहका ६ महिनादेखि ५ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरुमा भिटामिन ‘ए’ र १ देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औषधी खुवाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको पोषणको अवस्था जाँच गर्ने, ६ देखि २३ महिनाका बालबालिकालाई बुहुसुक्ष्म तत्व बालभिटा पोषणस्थिति लेखाजोखा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ । दैनिक नेपालबाट
यो पनि पढ्नुसः भिटामिन ‘ए’ को कमी भए के हुन्छ? शारीरिक विकास र स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने तत्व नै भिटामिन हो। शरीरलाई स्वास्थ राख्न र रोगबाट बचाउन भिटामिन अनिवार्य नै हुन्छ। भिटामिन मुख्यतयाः पानीमा घुल्ने र चिल्लो पदार्थमा घुल्ने प्रकृतिका हुन्छन्। भिटामिन ‘बी’ तथा ‘सी’ पानीमा घुल्ने र भिटामिन ‘ए’, ‘डी’, ‘ई’, र ‘के’ चिल्लो पदार्थमा घुल्ने हुन्छन्।भिटामिन ‘ए’ भएका तत्वहरु समग्र रुपमा स्वास्थ रहन र दीर्घरोग विरुद्ध उत्कृष्ट मानिन्छन्। दैनिक आहारमा भिटामिन ‘ए’ को उपयोगले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। त्यस्तै राति नदेख्ने रतन्धो रोगबाट जोगाउँछ। आँखा तेजिलो बनाउँछ। यति मात्र होइन, भिटामिन ‘ए’ ले छाला, श्वासप्रश्वास तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग लाग्न दिँदैन।
भिटामिन ‘ए’ को क्लिनिकल प्रयोग- विशेषगरी बाल स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग र समस्याहरुमा भिटामिन ‘ए’ को प्रयोग गरिन्छ। जस्तैः रतन्धो, दादुरा, दीर्घ झाडापखला, कडा कुपोषण, छालाको रोग आदि। भिटामिन ‘ए’ को कमीबाट हुने असर-प्रायजसो भिटामिन ‘ए’ को कमीले बालबालिकाको वृद्धि विकास र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। यसको कमीले रतन्धो रोग लाग्छ। त्यस्तै बालबालिकामा कुपोषण, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी, दीर्घ रोगहरु देखा पर्छ। भिटामिन ‘ए’ कमी हुँदा देखिने लक्षण– छाला सुख्खा हुनु र छालामा पटकपटक संक्रमण हुनु। – आँखा सुख्खा हुनु। – राति आँखा देख्न गाह्रो हुनु।– गर्भाधान नहुनु।– बालबालिकाको ढिलो विकास हुनु। – पटकपटक छाति तथा घाँटीको संक्रमण हुनु। – घाउ ढिलो निको हुनु।
यो पनि पढ्नुसः भिटामिन ‘ए’ को बारे जान्नै पर्ने कुरा-भिटामिन ए नखुवाउँदा हुने बेफाइदा बारे नवजात शिशु तथा बालरोग विशेषज्ञ डा. सुनिलराजा मानन्धरको भनाई यस्तो छ :— बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ किन खुवाउने ? —रतन्धो रोगबाट जोगिन । —श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्यामा राहत पाउन । —आँखा तेजिलो बनाउँन । —छाला सम्बन्धी रोगमा राहत पाउन । —रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न । —भिटामिन ‘ए’युक्त साग, सब्जी, फलफूल पर्याप्त मात्रामा खानुपर्छ । – विभिन्न अनलाइनबाट
Previous चितवनबाट आयो अत्यन्तै दुःखद खबर!
Next पतिपत्नी बीच झगडा भइ रहन्छ भने अप्नाउनुहोस् यी उपाय